Idozi ihuenyo ekwentị mebiri emebi: Nzọụkwụ iji dozie ma mezie ihuenyo | Gam akporosis
Ihe mbụ ị ga-ebu n'uche mgbe ị na-achọ ụzọ rụkwaa ekwentị gị, bụ na ịkwesighi ịgbaso usoro aghụghọ nke anaghị akwụsị ịga goingntanetị. N'agbanyeghị agbanyeghị nkwenye ha nwere ike iyi, ha bụ ọdịnaya ụgha, ma enwere ọtụtụ YouTubers nwalere ma gọnahụ 90% nke aghụghọ ndị a.
Ya mere ọ bụrụ n’otu ntabi anya, ị ga-ahụ vidiyo nke ha na-agwa gị na ị ga-eji obere ezé ezé rụzie ihuenyo mkpanaka gị, etinyela ya n’ihe egwu Karịa ihe ọ bụla n'ihi na o yikarịrị ka ị ga-agwụcha ya, ị ga-ahapụrịrị na-enweghị ọnụ gị. Ya mere, Anyị ga-akọwa ihe ị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ịchọtara onwe gị n'ọnọdụ a, ebe enwere usoro ị ga - agbaso tupu iwere ekwentị gị maka nrụzi. N'ihi na ee, ọ bụ naanị nhọrọ a pụrụ ịdabere na ya nke ị nwere.
1 Ihe ị ga-eme tupu emezie ekwentị mkpanaaka gị
1.1 Ihe mbụ ị kwesịrị ịme tupu emezie ekwentị mkpanaaka gị
1.2 Nzọụkwụ ọzọ ị ga - agbaso: tọgharịa
2 Ebee ka were mkpanaka gị maka nrụzi
Ihe ị ga-eme tupu emezie ekwentị mkpanaaka gị
Can nwere ike ugbua kpachara anya ma nwee mkpuchi kachasị mma, Ọ bara uru ihie ụzọ maka ekwentị gị ka ọ daa n'ala ma ọ bụ kụọ ihe na-eme ka ihuenyo ya mebie. Mana obi abụọ adịghị ya na nnukwu nkụchi obi bụ nke anyị tara ahụhụ mgbe ọ dara kpudo ihu n'ala, anyị wee jiri nwayọ bulie ya elu na-ekpeku chi nile anyị maara na ọ nweghị ihe mere ya.
Anyị amatalarị ihe ọ ga-eri iji rụkwaa ihuenyo nke Galaxy Fold
Mana ọ naghị arụ ọrụ mgbe niile, anyị na-ahụ ezigbo ihe ọghọm, ma ọ bụ nkwụsịtụ nke na-adịghị njọ nke na-enye gị ohere ịga n'ihu na-eji ọnụ gị. Mana nke a nwere ike ịka njọ, yabụ iji mezie ihuenyo nke mkpanaka gị, ị ga-aga ụlọ ọrụ nrụzi n'ọnọdụ dị mma. Mana dị ka anyị kwuru, tupu iwere ya iji rụkwaa enwere ọtụtụ usoro ị ga-agbaso, anyị ga-akọwara gị ha n'okpuru.
Ihe mbụ ị kwesịrị ịme tupu emezie ekwentị mkpanaaka gị
Y’oburu n’inwe obi oma na ekwentị gi ka n’arụ ọrụ, Tupu ị rụzie ihuenyo ahụ, enwere ihe ị ga-eme. Anyị na-ekwu na ị ga-echedo data gị nke mere na onye na-aga idozi ngwaọrụ gị enweghị ike ịnweta nzuzo gị. Maka nke a, ị ga - edetuo data ahụ wee hichapụ ya na ọnụ gị.
Iji nwee ike Detuo data site na ekwentị gi, ihe kachasị mma i nwere ike ime bụ ịkwado ngwaọrụ niile. Banyere ngwa ndị ibudatara, nke ọ bụla n'ime ha nwere usoro ndabere ya, yabụ ị ga-abanye nke ọ bụla wee hụ na ịgbalite ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị. Nke a dị mkpa na ngwa izi ozi, dị ka Telegram, WhatsApp na ụzọ ndị ọzọ. N'ezie, echefula ichekwa kọntaktị gị niile.
Ọ bụrụ na, n’aka nke ọzọ, ekwentị mkpanaka gị akwụsịla ịrụ ọrụ n'ihi ezumike ahụ, echegbula onwe gị, ihe niile agaghị efu. Ga-ejikọ ya na PC gị ka ịnweta data gị niile. Ọ bụrụ na ị nwere ọnụ ọnụ gam akporo, ị ga-enwe ike ịnweta foto na ndị ọzọ. N'ihe banyere inwe ngwaọrụ iOS, a na-emekọrịta ihe niile nke ọma, yabụ na ị gaghị enwe nsogbu. Ma ọ bụrụ na ị nwekwara mgbọrọgwụ, ị ga-enwe ike iji ngwa ndị ọzọ, dị ka Mbugharị na Titanium ndabere, ọ bụ ezie na nke a bụ ihe ị kwesịrị ịwụnye tupu oge eruo.
Nzọụkwụ ọzọ ị ga - agbaso: tọgharịa
E nwere ihe mere anyị gwara gị ka ị na-ndabere nke ihe niile i nwere tupu na-aga ịrụzi gị mobile ihuenyo, na nke ahụ bụ na ị na-aga nwere iji tọgharịa ya. Ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma na agbanyeghị ihuenyo mebiri emebi ọ ka na-arụ ọrụ, Anyị na-ahapụrụ gị usoro ị ga - agbaso iji tọgharịa ntọala ụlọ ọrụ, nke na-ewepụ ihe niile nke na ọ dị ka ọ si na igbe ahụ pụta.
Ọ bụrụ na ọnụ gị bụ gam akporo, ị ga-aga ntọala ma si ebe ahụ banye ngalaba sistemụ. Ozugbo ebe a, gosipụta nhọrọ ndị dị elu iji nwee ike ịbanye Nhọrọ Iweghachite. Ebe ị ga-ahụ nhọrọ nke kwuru Laghachi na steeti nrụpụta. N'ihe omume na oyi akwa nhazi nke onye nrụpụta egosighi gị nhọrọ a ebe a, ịnwere ike iji igwe nchọta iji chọta ya.
Ọ bụrụ na ị nwere iPhone, gaa na ntọala ma gaa na ngalaba General. Ebe a, fọrọ nke nta na njedebe nke nhọrọ, ị ga-ahụ Tọgharia, na ị nwere ike họrọ ma ihichapu niile ọdịnaya na ntọala nke mere na ọ na-anọgide dị ka ọhụrụ nke ya igbe.
Ọ bụrụ na ọ dị nwute na ihuenyo nke ekwentị gị anaghị arụ ọrụ, inwe ihe gam akporo mobile ị ga-eme a ike nrụpụta. Gbanyụọ ekwentị ma gbanye ya site na ịpị bọtịnụ ike na bọtịnụ olu olu n'otu oge. N'ụzọ dị otú a, ị ga-abanye n'ime nhọrọ nke gam akporo, site na ebe ahụ ị ga-edozi nhọrọ ndị ị ga-ahọrọ site na bọtịnụ na olu na olu, nke dị na nke a bụ Hichapụ data na oghere.
Ọzọ, n'ihe banyere inwe iPhone nke ihuenyo ya anaghị arụ ọrụ, usoro ahụ ga-adabere na sistemụ arụmọrụ. Iji macOS Catalina ma emesia ị ga-enwe ike ịchọ ekwentị gị site na Onye Chọta. Ọ bụ ezie na na nsụgharị ndị gara aga na Windows ị ga-ebudata iTunes. Site na nke a ị ga - enwe ike ịhọrọ iPhone gị na nhọrọ ndị ga - apụta ị ga - ahụ Weghachi iPhone bọtịnụ, yabụ na ị gaghị achọ imetụ ọnụ gị aka.
Ebee ka were mkpanaka gị maka nrụzi
Safzọ kachasị nchebe iji rụkwaa ihuenyo mkpanaka gị bụ iwere ya ma ọ bụ ziga ya na ọrụ ọrụaka ọkachamara. N'ebe ahụ, ha nwere ndị na-arụzi ọrụ bụ ndị ọkachamara na akara nke ọdụ gị, n'ihi ya, e mere ka nsonaazụ ọma dị mma. Nsogbu nke ọrụ ya bụ na ọ na-enwekarị ọnụ ahịa dị elu ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ, mana n'ezie, akụkụ ahụ mapụtara ga-abụ nke mbụ.
Nwekwara n'aka gị ụlọ ahịa na-arụzigharị na-arụghị ọrụỌ bụ ihe a na-ahụkarị ịchọta ma ọ dịkarịa ala otu n'ime ndị a ọkachamara na idozi ekwentị, yana n'ozuzu ha ọnụahịa ha dị ọnụ ala karịa. N'agbanyeghị nke a, dabere na ejiri ihe akụkụ mbụ ma ọ bụ nke dị mma, nsonaazụ ka mma ma ọ bụ nke ka njọ ga-enweta. Ọ bụghị otu na ịga ụlọ ahịa agbata obi karịa ịga BeMovil ma ọ bụ Phonelọ Ekwentị.
Nkwado kachasị mma anyị bụ na, ọ bụrụ na ngwaọrụ gị dị ọhụụ ma dịkwa oke ọnụ, gaa ụlọ ọrụ mmezi gọọmentị. Ma ọ bụrụ na ị tinyela ezigbo ego na ngwaọrụ gị, o yikarịrị ka ị ga-ahọrọ ijide n'aka na nrụzi ya nwere ntụkwasị obi. Ọ bụrụ na ọnụ gị dị afọ ole na ole na ịchọghị ịma ma nsonaazụ ya kachasị mma, ịnwere ike ịga ụlọ ahịa ndị ọzọ ma chekwaa ọtụtụ ihe.
Ọ bụrụ na ọdụ gị nwere mkpuchi, ịnwere ike iji ya rụzie ihuenyo mkpanaka n'efu. N'ikpeazụ ma ọ bụrụ na ị ga-anwa anwa n'ihi na ị bụ onye nwere nkà, enwere peeji nke dị ka iFixit ebe ha na-akọwa otu ị ga - esi mee ya, na mgbakwunye na ihe ị ga-achọ. Mana ọ bụrụ na ị lelee anya nke ọma, ego ahụ dị elu, yabụ ọ ka mma iji ya gaa saịtị ọkachamara maka idozi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Esi arụkwa ekwentị gị
Ngwa 9 kachasị mma iji lelee ọwa ụgwọ akwụghị ụgwọ 100%